Aragtida madaxweynaha Zimbabwe oo lacag noqotay! - BBC News Somali
Ma doonaysaa in aad la kullantid madaxweynaha cusub ee Zimbabwe Emmerson Mnangagwa?, haddii ay jawaabtaadu 'haa' tahay, waa in aad iska diyaarsataa qarash dhan $16 doolar.
Sida uu qorey wargeyska The Villager ee dalkaas kasoo baxa ayaa tabiyay in safaaradda Zimbabwe ee Namibia ay kireysay hoteelka Safari ee Windhoek, halkaas oo ay ka qabatay 300 kursi, qofkiina waxa uu ku galayaa lacag dhan $16 doolar, iyada oo dadkii aanan lacagta heysanin laga celinayay goobta.
Mnangagwa muxuu kaga badalnaan doonaa Mugabe?
"Marka aan codka dhiibeyno lacag ma bixino, balse marka aan rabno in aan aragno madaxweynaheena, lacag bixiya ayaa nala leeyahay " ayuu yiri mid ka mid ah dadkii gali waayay goobta maadaamaa uusan lacag heysanin.